Nomu S20, nyocha vidiyo nke ekwentị a siri ike nke na -efu € 135 | Androidsis
Nomu bụ onye nrụpụta ọkachamara na imepụta ngwaọrụ ndị pụtara ìhè maka nnukwu nguzogide ha na ujo na ọdịda, yana ịnwe asambodo IP68 nke na -enye ohere imikpu ekwentị Nomu na -enweghị nnukwu nsogbu. Na ihe atụ doro anya bụ Nọmba S20.
Ekwentị pụtara maka ọnụ ahịa ya dị mma, adịghị karịa 140 euro, na nke ahụ nwere asambodo IP68, na mgbakwunye iguzogide ujo na ọdịda. Achọghị ọzọ Ana m ahapụrụ gị nyocha zuru oke mgbe m nwalere Nomu S20 a otu ọnwa.
1 Nhazi dị mfe ma dị irè
2 Njirimara teknụzụ Nomu S20
3 Ihuenyo 720 bụ mgbe ụfọdụ ezuru
4 Nomu S20 siri ike bee
5 GPS nke na -arụ ọrụ nke ọma
6 Batrị nke na -arụ ọrụ ya na -enweghị nnukwu mmasị
8 Osisi foto ejiri Nomu S20 see
Nhazi dị mfe ma dị irè
N'ịmara na ọ bụ ọdụ ụgbọ ala mebiri emebi, m tụrụ anya na m ga -ahụ ekwentị brik a na -ahụkarị, nke buru oke ibu ma dị arọ karịa nkezi ngwaọrụ, mana Nomu S20 nwere njide ejidere nke ukwuu, karịa ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche njirimara teknụzụ ya.
Ọ bụkwa otú ahụ ka ọ dị ụfọdụ nha 145.4 x 75 x 10.30 mm, Tinyere ịdị arọ nke gram 169, Nomu S20 bụ ọnụ na -adị mma n'aka ma ọ naghị enye oke ibu. Tụkwasị na nke ahụ, azụ ya, yana ihe mkpuchi rọba ahụ nwere ngwụcha nwere ihu, na -enyere aka ijide ekwentị ahụ, na mgbakwunye na ịgbagha akara akara mkpịsị aka na -adịghị mma.
Ejiri roba a kpuchie ahụ niile nke ekwentị, n'agbanyeghị na n'akụkụ anyị na -ahụ ọla na mgbakwunye na ụfọdụ rivets nke na -enye Nomu S20 nnukwu nguzogide mmetụta na ọdịda. Na, dịka ị ga -ahụ na nyocha vidiyo anyị, ekwentị na -anagide mmetụta ya nke ọma, ọ bụrụhaala na ha esiteghị n'ogo dị elu. Maka ojiji kwa ụbọchị, ana m ekwe nkwa na ị gaghị echegbu onwe gị ma ọlị na ekwentị ahụ nwere mmebi ọ bụla, belụsọ ma ọ daa na ịdị elu dị elu karịa mita 1.5.
N'okpuru anyị na -ahụ ọdụ ụgbọ mmiri micro USB. Ọdụ ụgbọ mmiri a, dị ka mmepụta ọdịyo na oghere kaadị SIM, o nwere ihe mgbochi rọba nke ga -egbochi mmiri ịbanye. Anyị ahụworị azịza a na ọdụ Sony, yabụ na ọ bụghị ihe na -akpasu iwe.
Dịka m kwuru, na akụkụ nke elu anyị nwere mmepụta ọdịyo 3.5 mm nwekwara okpu mkpuchi, ebe n'akụkụ aka ekpe bụ ebe ndị nrụpụta nke onye nrụpụta Eshia tinyere oghere kaadị. nano SIM + micro SD.
N'ikpeazụ, n'akụkụ aka nri bụ ebe igodo njikwa olu dị, yana bọtịnụ ngwụcha na mgbanye ọnụ. Ụzọ ahụ karịrị nke ziri ezi na ihe niile mkpọchi bọtịnụ na -enye ezigbo nguzogide nrụgide, n'adịghị ka ọdụ ụgbọ ala ndị ọzọ siri ike ebe ọ na -esikarị ike ịpị bọtịnụ.
Ọ na -emetụ aka ikwu okwu n'ihu. Ebe a anyị na -ezute ụfọdụ karịa okpokolo agba dị ịtụnanya, ihe nwere nghọta na ekwentị ekwuru iji nagide ujo na mmetụta, na mgbakwunye na igwefoto n'ihu na obere ihe ọzọ. Na azụ, nke nwere mkpuchi rọba, bụ ebe anyị ga -ahụ igwefoto isi nke ngwaọrụ ahụ, yana akara ika na ọkà okwu ya.
Na nkenke, ngwaọrụ na -apụtaghị n'ihe eji eme ya mana ọ nwere akụkụ na ịdị arọ ya na -aga nke ọma, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na ọ bụ ọnụ na -emebi emebi. Maka na agwala m gị na ọ dịghị ka ọ dị. Ọ ga -amasị m ịnwe bọtịnụ SOS, bara uru nke ukwuu na ụdị ngwaọrụ a maka ndị na -eme egwuregwu egwuregwu na ihe egwu, yana maka ndị ọrụ chọrọ ekwentị nwere ike iguzogide ihe niile, mana n'ozuzu ya na -eji agba efe efe.
Njirimara teknụzụ Nomu S20
Usoro njikwa Android 6.0 Marshmallow
Ihuenyo 5 "IPS nwere teknụzụ 2.5D yana mkpebi HD 1280 x 720 ruru 294 dpi
Nhazi Mediatek MTK6737T nwere okirikiri 53 GHz Cortex A1.5 na ihe owuwu 64-bit.
Igwefoto na-aga n'ihu 219 MPX Sony IMX8 ihe mmetụta (na -atụgharị na 13 MPX) / autofocus / nchọpụta ihu / panorama / HDR / LED flash / Geolocation / 1080p ndekọ vidiyo.
Igwefoto ihu 2 MPX (na -agagharị na 5 MPX) / 1080p vidiyo
Njikọ GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 850/900/1800 / 2100MHz // LTE 800/900/1800/2100/2600/2300 MHz
Atụmatụ ndị ọzọ Redio FM / IP678 asambodo / ọdụ ụgbọ ala gbara agba na -eguzogide mmetụta na ọdịda
Akụkụ X x 146.8 72.6 7.5 mm
Ibu ibu 147 grams
Ahịa Euro 134 na IGOGO
Ekwentị nwere atụmatụ ga -akarị igbo mkpa nke onye ọrụ ọ bụla. N'ụzọ nke a, processor gị MediaTek MTK6737T, SoC nwere asatọ nwere ihe owuwu 64-bit, na-enye arụmọrụ zuru oke nke gbakwunyere na ya Nchekwa 3 GB Ram ha na -ekwe ka ihe niile na -aga nke ọma. Ma ọ bụ na akụkụ a bụ eziokwu bụ na Nomu S20 tụrụ m n'anya nke ukwuu site na mmụba nke ọ na -ebugharị sistemụ arụmọrụ, na -agagharị na windo dị iche iche ngwa ngwa na nkasi obi.
Ọ bụ ezie na ekwentị dị elu na-arụ ọrụ ngwa ngwa, na-emepe ngwa ngwa karịa ọdụ Nomu, ọ bụ ihe a ga-atụ anya ya ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche ọdịiche ọnụahịa dị oke njọ na m na-ekwe nkwa na Nomu S20 na -akpa agwa n'ụzọ dị ùgwù karịa. Anọwo m na -eji ekwentị a otu ọnwa ma ọ yighị ka ọnụ ụzọ ntinye - ọkara, cheta na ọ na -efu euro 134, na -enye arụmọrụ dị mma ma na -enye m ohere inye ya nnukwu ọrụ na -enweghị ntaramahụhụ ma ọ bụ njupụta. N'ezie, m na -agbanyụ ya n'abalị ọ bụla ka ọnụ ụgbọ ahụ wee malitegharịa.
Ọtụtụ otuto na -aga na interface nke Nomu S20 ji. Mana kedu interface, ọ bụrụ na ekwentị kụrụ ya ihe n'ezie Dị ọcha android? Kpọmkwem. Ị gụrụ nke ahụ n'ụzọ ziri ezi, onye nrụpụta ahọrọla ịghara iji ụdị omenala ọ bụla na -akpasu iwe na nke dị arọ site na ịwụnye gam akporo 6.0 M na -enweghị ngwa junk ọ bụla na ọdụ ụgbọ elu, ihe m ji kpọrọ ihe nke ukwuu.
Kedukwa ka o si arụ ọrụ na egwuregwu? Ọ dị mma, n'ịtụle GPU ọ na -ebuli, a pMali T-720 MP2 600 MHz ihe nhazi ihe eserese, Enwere olile anya na Nomu S20 nwere ike ibugharị egwuregwu ọ bụla na -enweghị nnukwu nsogbu. Ya mere, ọ dịla. Anọ m na -egwu egwuregwu nke chọrọ nnukwu ego iji rụọ ọrụ nke ọma, dị ka Knights duel, m ga -ekwukwa na ọdụ ụgbọ elu emeela nke ọma, na -ebugharị egwuregwu ngwa ngwa na enweghị nhụjuanya ọ bụla.
Nke a ga -agbakwunyere onye na -ekwu okwu dị ike nke tụrụ m n'anya site na ịdị mma ụda ọ na -enye, na -enye m ohere ịnụ ụtọ egwuregwu vidiyo na ọdịnaya nke nwere ụda ọdịyo dị elu karịa ka a tụrụ anya na ọdụ ụgbọ elu nwere njirimara ndị a.
Ihuenyo 720 bụ mgbe ụfọdụ ezuru
Ihuenyo Nomu S20 nwere nke Sharp IZGO 5-inch IPS panel nke na-egosipụta mkpebi HD, pikselụ 1280 x 720, yana njupụta nke 295 dpi, na mgbakwunye na nchekwa Corning Gorilla Glass 4 nke na -ekwe nkwa iguzogide mmetụta na ọdịda. Nke a bụ ihe ịtụnanya ọhụrụ. Amakwa m ịhụ na ọdụ ụgbọ ala mebiri emebi nwere ihuenyo a na -ahụkarị, mana n'ihe gbasara Nomu S20, na dịka ị pụrụ ịhụ na nyocha vidiyo na -eduga akụkọ a, ogo onyonyo a dị mma nke ukwuu.
Ogwe IPS nke S20 na -enye agba doro anya nke ukwuus na mgbakwunye na inwe akụkụ nlele dị mma. Ọkwa ihie adịghị mma na ụbọchị anwụ na -acha ị nwere ike ịhụ ihuenyo, mana ọ bụghị otu ịdị nkọ ka ọ dị na ọdụ ndị ọzọ. Mana n'ozuzu, na -eburu n'uche ebumnuche ya na ọnụahịa ya, ọ dị m ka otu enyo kacha mma ị nwere ike ịhụ.
Ọ dị oke njọ gbasara nnukwu okpokolo agba ndị ahụ na -eme ahụmịhe ahụ ka ọ dị ọnụ karịa mgbe ị na -elele ọdịnaya ma ọ bụ na -egwu egwuregwu vidiyo. Ihuenyo nwere 64% nke akụkụ ihu, ihe ezi uche dị na njedebe nke njirimara ndị a mana nke ahụ na -agbada ịdị ukwuu n'iji ya eme ihe. Ihe ọjọọ dị ala n'ọnọdụ mgbanwe nnukwu nguzogide nke Nomu S20.
Nomu S20 siri ike bee
Anyị agwala gị na Nomu S20 bụ asambodo IP68 yabụ ekwentị na -eguzogide uzuzu na mmiri, na -enwe ike imikpu n'ime mita 1.5 n'omume maka nkeji iri atọs. Atụkwasịghị m atụmatụ a obi nke ukwuu, karịa na ekwentị nwere ọnụ ahịa ezi uche dị otú a, ekpebiri m itinye ule ahụ n'ule. Ọ gafekwara na agba na -efe efe.
Nnwale ule m Mmiri Nomu S20 mikpuru n'ime nkeji iri atọ ọ gafere ule n'enweghi nsogbu ọ bụla. Enwere m ike ịnweta oku na ozi. N'ezie, ịse foto na ọdụ ụgbọ mmiri mikpuru bụ ịta ahụhụ, ọ nweghị ihe enweghị ike idozi site na ịhazi otu bọtịnụ anụ ahụ iji mee ka igwefoto ekwentị rụọ ọrụ na ngwa.
Na ụkpụrụ, Nomu S20 enweghị asambodo ndị agha mana ọ bụ ọdụ ụgbọ ala siri ike. Kedu ihe ike ike pụtara? nke ọma, ịsị na ọ bụ adjective Castilianized nke sitere na bekee «ruggedize» Nke ahụ pụtakwara na ọ dịla njikere inye nguzogide ka mma maka ujo, ọdịda na oke okpomọkụ.
N'ụzọ dị otú a, na dịka O nwere ike ịbụ na i jirila atụmatụ ahụ kpọrọ ihe, Nomu S20 nwere nguzogide dị egwu na ihe ijuanya karịa ekwentị nkịtị. Anyị mere ọtụtụ ule gafere nkwanye onye nrụpụta ka ọ nwee ike iguzogide ihe ruru mita 1.5 n'ịdị elu ma ekwentị guzogidere ọtụtụ ọdịda, n'agbanyeghị na ọ mechara nwụọ mgbe mmetụta nke anọ gachara. N'ọnọdụ ọ bụla, yana dịka ị ga -ahụ na vidiyo ahụ, a tụpụrụ ekwentị site na elu karịa mita abụọ, yabụ enwere m ike ịsị na Nomu S20 ga -eguzogide ọdịda ọ bụla nkịtị, site na otu mita ma ọ bụ otu mita na ọkara, na -enweghị na -ata ahụhụ..
GPS nke na -arụ ọrụ nke ọma
Mgbe m nwalere ekwentị China, m na -echegbu onwe m mgbe niile GPS. Ọdụ ụgbọ elu ndị a na -enyekarị nsogbu na nke a yana ekwentị nwere njirimara ndị a, nke ga -abụrịrị ihe na -eguzogide karịa ka ọ dị na mbụ na ebumnuche ya bụ profaịlụ onye njem, ga -enwerịrị ezigbo GPS.
Ọ dabara nke ọma na Nomu S20 nwere ngwa GPS, AGPS na GLONASS yabụ maka onye ọrụ ọkọlọtọ ọ bụla ọ ga -ezuru ya. Anọ m na -eme ule na Barcelona na ngwaọrụ ahụla m na mkpuchi ole na ole. Ejiwokwa m ya na-aga na-agba ọsọ na ọnọdụ geo-geo adịla mma.
Batrị nke na -arụ ọrụ ya na -enweghị nnukwu mmasị
Batrị Nomu S20 nwere 3.000 mAh na, n'ụzọ doro anya, ọ bụghị mbughari. Echere m na ọ bụ ihie ụzọ ijikọ ụdị batrị a nwere oke ebe S30 na S10 nwere nnukwu batrị, nke ruru ike mAh 5.000. Aghọtara m na n'ihe banyere S20 ha mere ya ka ọnụ ahịa ahụ wee tụọ obere, mana ngwaọrụ nke njirimara ndị a ga -enwerịrị nnwere onwe dị elu karịa ka ọ ghara ịhapụ gị ịgha ụgha n'oge kacha njọ.
Anọ m na -eme ọtụtụ ule na m ga -ekwu na nnwere onwe emeghị m ihere, mana ọ tụghịkwa m n'anya. Otu ụbọchị eji oke egwu, yana egwu 1 awa, awa 2 nke Spotify, ịza ozi ịntanetị na iji netwọkụ mmekọrịta dị iche iche na mgbakwunye na ịntanetị, ọdụ ụgbọ ala abatala n'abalị nwere batrị 30% - 35%.
Nke a na -ebute annwere onwe nke dị ihe dị ka otu ụbọchị na ọkara ogologo. Ọmarịcha mara mma mana na -eburu n'uche ihuenyo HD ya na teknụzụ IGZO m tụrụ anya na ọ ga -eru ụbọchị abụọ nke nnwere onwe.
N'ikpeazụ, a ga m agwa gị okwu pụọ igwefoto. N'ọnọdụ a, anyị na -ahụ igwefoto n'ihu megapixel 2, nke nwere ike ịgbanye ya ruo 5 mpx. Nke bụ eziokwu bụ na njide njide ahụ adịghị mma, yabụ anyị ga -elekwasị anya na igwefoto n'ihu ya, nke Sony IMX12PQ Exmor lens guzobere, yana ezigbo megapixels 8 na a. Igwe oghere f / 2.0.
Onye nrụpụta agwala anyị na ekwentị tMmelite ngwanrọ ga -abịa n'oge na -adịghị anya nke ga -eme ka ogo onyogho ahụ ka mma mana m ga -ekwu na, na -agaghị agbasi mbọ ike, njide ejiri Nomu S20 zuru ezu iji zọpụta gị ọsọ ọsọ. N'ọnọdụ ebe ọkụ na-enwu nke ọma, ọ na-ese foto ụfọdụ dị oke mma, nwere agba doro anya na ezigbo. N'ezie, ọ bụrụ na ịchọrọ ịse foto na gburugburu ọkụ adịghị mma ma ọ bụ n'abalị, ọka ga -apụta n'ime onyonyo a. N'agbanyeghị ole ọkụ ị na -eji.
Ekwuru m, igwefoto na -enweghị nnukwu ọmarịcha mana nke ahụ ọ karịrị imezu ebumnuche ya site n'inye mma karịa nke ga -eme ka ị pụọ ngwa ngwa ma kwe ka ị see foto ahụ dị ịtụnanya n'etiti ugwu
Osisi foto ejiri Nomu S20 see
Nomu O juru m anya na nke a Nọmba S20. N'iburu n'uche njirimara teknụzụ ya, eziokwu ahụ bụ na ọ na-eguzogide uzuzu na mmiri, ekwentị gbagọrọ agbagọ iji nagide mmetụta mberede na ọdịda, mee ekwentị a ka ọ bụrụ nhọrọ a na-achọsi ike ma ọ bụrụ na ị na-achọ ekwentị dị ọnụ ala nke bụ ala niile.
Amachibidoro imewe ka ọ bụrụ ọnụ mkpọmkpọ ebe
Ogo ihuenyo na -atụ n'anya
Ọnụahịa dị ezigbo mma
Nwere FM Radio
Ọkà okwu gị na -ada ezigbo mma
Ọ nweghị ọkwa ngosi LED
Nnukwu okpokoro n'ihu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Nomu S20, nyochaa na Spanish
Kedu onye ọzọ na -eche nke a?
Ana m asọpụrụ imewe na iguzogide ekwentị a, achọrọ m imeri ya na mmemme #BlackFriday nke a ga -eme na webụsaịtị Nomu ukara.
Nke a bụ njikọ ozi: https://www.facebook.com/nomues/posts/1571994802826016
Ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ nke ọma, ị na -eme nke ọma, enwere m olileanya imeri. haa haa
Alfonso, ọ masịrị m nyocha gị nke ekwentị a mana echere m na ọ dịghị mkpa imepụta oke ihe dị ka "rugerizar". Enwere ụzọ ndị ọzọ na -enweghị mkpa ịkụ asụsụ anyị.
Zaghachi Antonio GIR
Ọ bụrụhaala na ha edekọghị vidiyo na -eme gị ihe a: http://www.youtube.com/watch?v=paNoi16Ly2k … Haahaha
Daalụ maka ndetu! Ọ masịrị m na ọ naghị abanye na oke mkpọtụ: a na -anabata onyinye a mgbe niile: 3 n'agbanyeghị na m chere na x1 nwere cores 8 1.5 GHz, 4GB Ram, ebe nchekwa 64GB, na igwefoto 13 megapixel abụọ ka mma; enwere vidiyo ebe ha na -atụnyere ha ... (Enwere m olileanya na ọ nweghị hama gụnyere xD)
Zaghachi Sarah Puma H.
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa Pixel na-eme ka akaụntụ Google ha kwụsịtụrụ
Otu esi zoo foto site na gam akporo iji zipu ha n'enweghị nsogbu (yana kwa ozi)